Nokuba ungumnini wevenkile ye-eCommerce okanye ibhlog ye-spirande, till ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo kwimixholo. Ukubeka ingcinga kwisicatshulwa sakho esibonisiweyo (okanye uyilo lochwethezo) akubalulekanga xa Ukudala ubuhle bendawo yakho kunye nokuqinisekisa impumelelo.
Nantsi in, unokuba nethemplethi eyoyikisayo you-WordPress okanye ubeke imifanekiso enomdla kwiwebhusayithi yakho NANGONA kunjalo ukuba usebenzisa ifonti esisiseko engafundekiyo (okanye okubi kakhulu kwi-Comic Sans!), Kaja.
Kwaye, ulahlekile kubuhle be-typografik ni-underbara web efumaneka kwi-Intanethi.
Ngethuba le-25 lewebhu ekhuselekileyo yefayili, uya kuqiniseka ukuba unobumba be-web typografi ebalulekileyo kwiwebhusayithi yakho esebenza lonke ixesha, ekupheleni kweli nqaku!
1.2 Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Web Safe-teckensnitt kwiWebhusayithi yam?
2 I-25 I-Webbsida Safe Safe kwiWebhusayithi Yakho
2.6 11. NY Courier
Ukuba ifayili oyisebenzisileyo ayifakwanga kwikhompyutheni yomsebenzisi, i-webbplats yakho iya kubuyela kwipolisi jaizukulwana, edlalwa ngamanye amaxesha njengokuba ingafundwanga.
Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Web Safe-teckensnitt kwiWebhusayithi yam?
Ukuba ufuna ukugcina i-brand kunye nebonakalayo ye-webbplats yakho iyavumelana, ngoko usebenzisa ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ibonakala ngokuqinisekileyo njengoko uzimisele ukuba yuba.
Enyanisweni, phantse yonke i-website namhlanje isebenzisa uhlobo oluthile lwefonti ephephile. Abaqulunqi bewebhu baya kuhlala becebisa ukukhetha ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukwenzela ukuba ugweme ukuba nefonti eziqhelekileyo, njenge-Times New Roman, ibonakale xa abasebenzisi bavakashela iwebhusayithi yakho ukubafengiso.
Kukho iindlela ongayisebenzisa ukuzongeza la maxwebhu kwiphepha lakho lewebhu, kodwa ukuba awukho kwiprogram okanye unamava angama-teknoloji, unokwenza ngokukhawuleza ukukopisha ikhowudi eyi-CSS enobumba kwaye unamathe ngqisa zebi.
Yithwala ifayile yakho ni header.php
Namathisela ikhowudi phezulu kwefayili yakho jaihloko.
I-25 I-Webbsida Safe Safe kwiWebhusayithi Yakho
11. NY Courier